Governemanta UK: 'Henjana' ny haavon'ny fampihorohoroana ankehitriny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Governemanta UK: 'Henjana' ny haavon'ny fampihorohoroana ankehitriny
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Governemanta UK: 'Henjana' ankehitriny ny haavon'ny fandrahonana fampihorohoroana
Ny fanapahan-kevitry ny governemanta UK hampiakatra ny haavon'ny fandrahonana fampihorohoroana dia ho setrin'ny daroka baomba fiara tao Liverpool tamin'ny alahady, izay nambaran'ny polisy ho fanafihana fampihorohoroana.
Ny UK teo aloha dia nampiakatra ny haavon'ny fandrahonana ho 'henjana' tamin'ny Novambra 2020 taorian'ny andiana fanafihana tany Eoropa.
Ny haavon'ny fandrahonana fampihorohoroana any UK dia nahena ho 'lehibe' tamin'ny volana febroary taorian'ny 'fihenana lehibe' tamin'ny tranga.
Ny fiakaran'ny isa amin'izao fotoana izao dia noho ny fipoahana baomba no tranga faharoa tao anatin'ny iray volana.
Taorian'ny nitarihan'ny Praiminisitra Boris Johnson ny fivoriana vonjy maika ao amin'ny Biraon'ny Kabinetra (COBR), dia nanambara ny governemanta britanika fa nampiakarina ho 'henjana' ny fandrahonana fampihorohoroana ao amin'ny firenena.
Ny haavon'ny fandrahonana fampihorohoroana 'henjana' dia midika fa misy fanafihana hafa heverina ho 'azo inoana.'
Ny fanapahan-kevitra, izay nohamafisin’ny Sekreteram-panjakana Priti Patel, dia nalaina tao amin'ny Joint Terrorism Analysis Center (JTAC) – vondrona manampahaizana miady amin'ny fampihorohoroana avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny fampiharana ny lalàna sy ny sampam-piarovana izay miorina ao amin'ny foiben'ny MI5 any London.
Nilaza i Patel fa ny fisondrotry ny taham-pahamalinana dia noho ny teti-dratsin'ny baomba ho "tranga faharoa tao anatin'ny iray volana." Ny famonoana antsy ny solombavambahoakan'i Tory David Amess tamin'ny volana lasa teo, izay noheverina ho fanafihana fampihorohoroana nataon'ny polisy teo aloha no tiany horesahina.
“Misy fanadihadiana mivantana atao amin’izao fotoana izao; mila fotoana, habaka, hanaovana ny asa izay ataon'izy ireo amin'ny fanadihadiana momba ny zava-nitranga izy ireo, "hoy i Patel, ary nampiany fa ny governemanta dia "miantoka fa manao ny dingana rehetra ilaina izahay."
Ny UK teo aloha dia nampiakatra ny haavon'ny fandrahonana ho 'henjana' tamin'ny Novambra 2020 taorian'ny andiana fanafihana tany Eoropa. Nidina ho 'lehibe' izy io tamin'ny Febroary taorian'ny 'fihenana lehibe' tamin'ny tranga. Ny haavon'ny 'henjana' no naoty fahamalinana faharoa avo indrindra, ka ny 'kritika' ihany no laharana eo amboniny.
Nahatratra efatra ny fisamborana ny polisy mikasika ny fipoahana tamin'ny alahady, izay nanapoaka baomba namboarina teo ivelan'ny taksiborosy iray. Liverpool Hopitalin'ny vehivavy. Ilay mpanapoaka baomba ihany no namoy ny ainy.